B sa B...? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Maro dia maro, ry Havana, ireo vaovao sy maresaka navoakan’ireo mpampahalala vaovao tao ho ao. Mahavalalanina.
Misy ifandraisany ve ny fahamaroan’ireo vaovao ireo sy ny fampitandremana ho an’ireo mpampita vaovao ? Fampitandremana niainga tany amin’ny fara-tampony, any amin’ny Filoham-pirenena, mihitsy nandritra ny Filankevitry ny Minisitra. Fampitandremana mbola nampitain’ny Minisitra mpiahy ny asa fanaovan-gazety izany tamin’izao fiandohan’ny volana marsa izao. Angamba.
Isan’ny hevi-dehibe novoizin’ireo mpampita vaovao tao ny resaka momba ny andramena na “boaderaozy” izay voambolana mahazatra kokoa ny sofina ankehitriny ary ny hevi-dehibe faharoa dia ny baomba. Izay no mahatonga ny lohateny teny am-piandohana B sa B e ? Boaderaozy sa Baomba no ho resahiko ?
Sarotra ny fandidiana. Miainga tamin’ireo vaovao ireo ve ny fampitandremana ? Inona ary no vaovao diso tamin’ny nampitain’ny mpanao gazety ? Raha raisina tokoa ny fampitandremana dia voalaza fa misy ny vaovao diso navoakan’ny mpanao gazety. Ny fanononana anaran’olona milomano anaty fanondranana boaderaozy ve sa ny famoahana vaovao momba ny baomba tsy tena izy ? Marihina fa raha ny anarana re dia ny fitsarana no nahitana ny sasany.Misy kosa ireo anarana azo avy any ampotony hoy ireo mpikirakira vaovao. Fantatra ireo olona tena misahana io resaka fanondranana io. “Raha te ho faty dia manonona anarana” hoy ity mpanao politika iray akaikin’ny Pr Zafy Albert. Nambarany fa matoa ny Pr Zafy nitsahatra dia fantany fa matanjaka ireo manao ny asa ratsy ary mbola tsy sahy ny Fanjakana sy ny Fitsarana. Nomarihany fa teto Antananarivo nandritra ny fivorian’ny Antenimieram-pirenena iny ireo mpanondrana boaderaozy. Isan’ny namatsy vola nampivadika ny safidin’ny olom-boafidy izy ireo “hono”. Aleo asiana “hono” ihany aloha. Ny depiote iray izay lasa any ivelany dia milaza mazava ao amin’ny kaonty Facebook-ny fa misy endrika kolikoly ny fivadihan’ny namana GPS sasany taorian’ny fivoriana teny Tsimbazaza. Manamafy ilay ahiahy izany vaovao nosoratany izany. Tsara raha mba henoin’ny Fitsarana io depiote io rehefa tafaverina eto an-tanindrazana. Marihina fa isan’ny anarana voatonona ny anaran’ity depiote ity fa tsy afaka mivoaka fa izao izy any ivelany izao. Lasa talohan’ny famoahana ny vaovao fa misy depiote tsy mahazo mivoaka. Efa maro izay anarana re fa misahana ny fanondranana izay fa e e e mbola tsy nisy aloha hatreto ny tena lohandohan’ny mpisorona nosamborina. Ilay olom-boatendry iray izay efa nigadra aza manomboka re eny amin’ny onjam-peo ny feony.
Nipoaka tokoa raha vao resaka vaovao momba ny baomba nolazaina. Nipoaka ny vaovao na dia tsy nipoaka aza ilay baomba. Efa tafakatra ho valo sahady ireo baomba tsy tena izy hitan’ny olona teny amoron-dalana teny. Nisy iray tamin’ireny no tena nisy vanja raha ny fantatra dia ilay teo akaikin’ny sekoly Lasainty (Sainte Famille) ao Mahamasina Antananarivo izany. Ny sisa dia fonosana natao hampihorohoro na kitapo diso toerana. Misy tokoa ny kitapo fianarana nisy nangalatra ary dia napetraka teny ho eny. Dia niantsoana ireo manam-pahaizana dia niantsoana ireo mpampita vaovao. Ary dia nahasarika vahoaka. “Nipoaka ve ?” “Firy no naratra ?” “Nisy ra ve ?” “Iza no mpanao politika tonga teny ?” izany no fanontaniana hapetrak’ireo mpikirakira vaovao re mifampitafa indrindra ireo tsy nahatratra. Ahoana tokoa moa no mivoy ireny tranga ireny ny filazam-baovao e ? Efa tsy nisy na inona na inona intsony dia mbola ho vaovao ihany ve ? Manampy an’ireo te hampisavorovoro saina ny fanaovana izany. Zary manao tsinontsinona an’ireo mpitandro ny filaminana mihitsy. Isan’ny manahiran-tsaina ihany koa ny fandrenesana manam-boninahitra milaza fa misy olom-boafidy ao ambadik’ireny baomba ireny. Dia ho sanatria nirotsaka ho fidina ve ny mpanao ratsy mba hahazoana ilay “immunité parlementaire” izay voambolana tsy hita ao anaty Lalampanorenana ? Voalaza fa io “immunité parlementaire” io ihany koa no nirotsahan’ireo mpandraharaha sasany ho fidina depiote. Mba tsy ho voaelingelina mandritra ny dimy taona be izao. Efa tsy noelingelenina izy ireo nandritra ny Tetezamita izay nanao masobe tsy mahita tsotra izao.
Ka na boaderaozy na baomba dia samy manahiran-tsaina avokoa. Mila mpitondra sahy mamaky bantsilana, sahy miatrika ireo “tontakely” eto an-toerana sy any ivelany ire any andafin’ny riaka ireo aza no tena goavana. Mila hampahafantarina ny vahoaka hahazoana ny fon’ireo vahoaka Malagasy hanamora ny fanohanana ny mpitondra sahy sy mahitsy.